I-Curata: I-Curate Okuqukethwe Okufanelekile Kwebhizinisi Lakho. | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 10, 2013 ULwesibili, April 5, 2016 Douglas Karr
ICurata isoftware curation software, ekusiza ukuthi wenze kalula thola, hlela bese wabelana okuqukethwe okufanele ibhizinisi lakho.
Ukukhethwa kokuqukethwe ubuciko nesayensi yokuthola nokwabelana ngokuqukethwe kwekhwalithi esihlokweni esithile. I-Curation ikusiza ukwakha izithameli. Ube usuneqembu elikhulu labantu ongabelana nabo ngokuqukethwe kwakho, nokuthi ngubani ongasabalalisa igama. nge UNeicole Crepeau ku-Convince and Convert
Thola - ICurata iqhubeka ngokukhipha iwebhu ukukhomba okuqukethwe okufanele kwebhizinisi lakho. Ipulatifomu ikusiza ukuthi uthole okuqukethwe okuku-inthanethi okusha futhi okunenjongo, yenza ngcono futhi ulawule ukugeleza kokuqukethwe ngokufaka imithombo kulungiswe futhi kulungiswe
okutholakele - ukufunda okuqukethwe okuncamelayo njenge-curate yakho.
Hlela - Okuqukethwe kwamaKhathalogi ngokukhalipha ukuze ukwazi ukuthola okudingayo. Okuqukethwe kungahlukaniswa futhi kuhlelwe ngakho-ke kufinyeleleka kalula ngezincomo zokuthuthukisa i-SEO yakho nokuzibandakanya kwezethameli. Ngokuhamba kwesikhathi, ipulatifomu yakha ingobo yomlando yokuqukethwe ukuze ukwandise ukusebenzisa kwakho injini yokusesha.
Ungahlukıselana - Isabalalisa okuqukethwe kuye, ezinye noma zonke izindawo zakho eziku-inthanethi. Ungachaza, wenze ngendlela oyifisayo futhi ubeke amazwana kokuqukethwe kwakho okukhethiwe, ukukushicilele kuzethameli zakho ukuthi ukhetha nini nokuthi kuphi futhi kanjani futhi ukukala imiphumela yakho ukuze uqhubekisele phambili ukufinyelela kwakho kuzethameli ozifunayo.
Tags: ukukhishwa kokuqukethweUkukhangisa Okuqukethwecuratacurationuhlelo lokugcinaipulatifomu yokuphelisa
Amasu Wokumaketha we-B2B ka-2013 nangaphaya kwawo